3 Yakanakisa Pamhepo Makasino ane Akanakisa Mushandisi Chiitiko - Online Casino Bhonasi Makodhi
Posted on April 2, 2020 April 2, 2020 munyori Andrew	Comments Off pane 3 Zvakanakisa Online Casinos ane Akanakira Mushandisi Kuitika
Yakatangwa neNRR Entertainment Limited muna 2014, Slotty Vegas Casino ine mitambo inodarika zana uye inotsvedza pane yekupa; ese ayo akapiwa vanogadzira software senge Microgaming uye NetEnt. Iyi kasino online inotumirwa neMalta Gaming Authority uye neUnited Kingdom Kubhejera Commission. Imwe yemabhenefiti akakura ndeyekuti ine yakanaka sarudza yemitambo mhenyu yemitambo, kusanganisira shanduro dzichangoburwa dzeblackjack uye roulette.
888 Casino yakapihwa rezinesi neUK Kubhejera Commission uye Gibraltar Regulatory Authority. Iyi mubairo-kuhwina kasinova inopa akawanda mabhonasi, kukwidziridzwa uye kuwirirana zvirongwa kune vatambi vayo. Spins yakasununguka inopihwa vese vatambi vatsva uye varipo. Pasinei nezvako zvaunofarira kutamba uye bankroll, pachave nechimwe chinhu chinonakidza iwe pa 888 Casino.
888 Casino inopa anopfuura mazana mazana maviri slots, ayo akapihwa neWMS neNetEnt. Kana iwe usingade slots, saka iwe unogona kuedza yayo tafura mitambo. Dzimwe dzakanakisa tafura mitambo roulette, dema, poker vhidhiyo uye baccarat. Rondedzero yezvisarudzo zvebhangi zviripo zvakare zvakakura kwazvo. Semuenzaniso, unogona kuisa kana kubvisa mari uchishandisa MasterCard, Visa, Skrill, PayPal kana e-wallet. Deposits anokurumidza, uye kubvisa kune anotora 200 kusvika mashanu mazuva ekushanda.
Zano: kana uchibva America, tsvaga iyo akanakisa macasino anotungamira muU.SA. pano.
Yakatangwa muna 2016, ShadowBet Casino ndeimwe yemabhasino mashoma ayo anovimbisa yakanakisa ruzivo rwevashandisi. Inotakura slots kubva kuMicrogaming, Betsoft, uye NetEnt. ShadowBet inozivikanwa zvakanyanya kune yayo inofambira jackpots uye mapurogiramu ekubatana. Mitambo inodarika mazana mashanu parizvino iri kupihwa, uye shanduro nyowani dzevatema uye roulette dzinowedzerwa kuLabhurari kamwechete kwenguva. Iyo casino inopa Visa, MasterCard, Skrill, Neteller uye PayPal senzira yekutanga yekubhadhara.
Rondedzero yemakanakiro epamhepo epamhepo yakadarika kupera, asi 888 Casino, ShadowBet Casino, uye Slotty Vegas Casino zvinomira kunze kwechaunga nekuda kwavo kukuru kwemitambo mitambo, nzira dzakawanda dzekubhadhara, uye zvimwe zvivakwa. Makasino aya anogamuchira ongororo dzakanaka kubva kune vatengi vavo. Tinokurudzira kuti iwe uverenge kuongorora kwavo nokungwarira uye enzanisa mabhonasi avo uye nemitambo.